ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြန်မာဒုက္ခသည်များ ခေါ်ယူရေး အမေရိကန် ရပ်ဆိုင်းမည်
gothic lay said...
in my view, this case looks like discrimination between refugees who has UN card and refugees who has not UN card. also the UNHCR give the stress to the refugees who has not UN card. where is their UDHR convention?
ဒုက္ခတယ် မြန်မာမှာ ငတ်သေတဲ့မသာတ ယောက်မှမရှိဘူး နိုင် ငံခြားသွားပြီ ဖထွေးအ ဖေခေါ်ခြင် တဲ့ကောင်တွေနဲ့လက် ကြေားတင်းအောင် လုပ်မစားခြင် တဲ့ကောင်တွေဘဲဖြစ်မယ်